Ungayibuyisela kanjani imifanekiso ye-iPhone? | Izindaba ze-IPhone
Eminyakeni embalwa eyedlule, lapho ama-opharetha exhasa ama-terminals, womabili aphezulu kanye nalawo aphansi, ukuze ahehe inani elikhulu lamakhasimende, abasebenzisi babhekane nenkinga yezicelo zomdabu ze-opharetha, izinhlelo zokusebenza ezazingaze zikhishwe ngendlela elula , kusukela badinga ulwazi oluningi.
Ngenhlanhla, eSpain nakwamanye amazwe amaningi, asikaze siyithole inkinga ye-bloatware ku-iPhone, okungenani ngabantu besithathu, ngoba i-Apple isinikeza uchungechunge lwezinhlelo zokusebenza iningi lethu elingalokothi lizisebenzise futhi ezigcina ekugcineni kufolda elahliwe , Akusizi ngalutho nanoma yini esifuna ukuyibiza ngayo. Kwesinye isikhathi kuleyo folda bayanyamalala njengezinye izinhlelo zokusebenza esingazitholi ndawo. Uma lokhu kuyicala lakho, khona-ke sizokukhombisa ungazibuyisa kanjani izithonjana nezinhlelo zokusebenza zesistimu ezisusiwe noma banyamalala.
Lesi sifundo esilula singasikhipha esibophweni uma siguqula izithonjana zezinhlelo zokusebenza ze-iPhone futhi asazi ukuthi sizibuyisela kanjani ezangempela.
Indlela eya phambili ilula kakhulu:
1 Ungasithola kanjani isithonjana se-iPhone esusiwe
2 Ungazibuyisa kanjani izinhlelo zokusebenza ezisusiwe ku-iOS
3 Uma ukuphela kwethu kune-jailbreak
Ungasithola kanjani isithonjana se-iPhone esusiwe
Ngokuya ngohlobo lwe-iOS olutholakala esigungwini sakho, kungenzeka ukuthi izinketho zemenyu zehluke kulezo eziboniswe kulo mfanekiso
Uma idivaysi yethu isiqalile ukumisa ukukhombisa isithombe sezinye izithonjana zohlelo, noma sifuna ukuqeda konke ukwenza ngezifiso esikwenzile ku-terminal yethu sisebenzisa i-jailbreak, singahlala sisebenzisa uhlelo lokusebenza esikwenze ngalo, njalo futhi lapho esisinikeza inketho yokubuyisa ushintsho.
Uma kungenjalo, ngenxa yenani elikhulu lezinketho i-iOS eyenza sitholakale kuzo, singabuyisa isithonjana sazo zonke izinhlelo zokusebenza esizifakile ku-iPhone noma i-iPad yethu ngohlelo. Ku buyisa isithonjana sohlelo lokusebenza kumele senze lezi zinyathelo ezilandelayo:
Chofoza ku- Izilungiselelo.
Ngaphakathi Izilungiselelo, chofoza ku General.
Ngemuva kwalokho siyacindezela General siya ku Setha kabusha.
Ezinketho ezahlukahlukene ezinikezwa yile menyu, kufanele sichofoze Setha kabusha isikrini sasekhaya.
Ukuqedela inqubo, idivayisi izoqala kabusha ukwazi ukwenza izinguquko. Lapho ukuqala kabusha kwedivayisi sekuqedile, izithonjana ezaziboniswe ngaphambilini zimhlophe noma zazingakhonjiswa ngqo, zizotholakala futhi ngesithonjana esijwayelekile.
Kule menyu unezinye izinketho zokubuyiselwa kwe-iPhone okungekubi ukwazi ukuthi zikhona.
Ungazibuyisa kanjani izinhlelo zokusebenza ezisusiwe ku-iOS
Ngokukhishwa kwe-iOS 12, i-Apple ingeze isici esisha lokho isivumela ukuqeda zonke lezo zicelo zomdabu esingahlelile ukuzisebenzisaKungenxa yokuthi azinanjongo ngathi noma ngoba sifuna ukusebenzisa enye imisebenzi enemisebenzi eminingi.
Yize into ejwayelekile futhi ejwayelekile ukuqoqa izinhlelo ezingenamsebenzi zohlelo kufolda, uma kungenzeka sizidinge ngesikhathi esithile, kungenzeka ukuthi uma isikhala sedivayisi yakho sihlala siphansi, uthathe isinqumo isuse kusuka kudivayisi yakho, sibonga lo msebenzi owethulwe yi-Apple.
Lapho siqhubeka nokususa uhlelo lokusebenza lwendabuko, empeleni ayisuswanga ngokuphelele kudivayisiEsikhundleni salokho, ifihliwe ekubukeni komsebenzisi futhi inciphisa ubukhulu bayo iye kokulungile futhi okudingekayo. Isizathu ukuthi zonke izinhlelo zokusebenza zomdabu ze-iOS, ngezinga elikhulu noma elincane, zihlanganiswe nezinto ezahlukahlukene zohlelo, ngakho-ke ukususa uhlelo lokusebenza kungonakalisa ukuzinza kwalo.
Uma sifuna ukusebenzisa noma yiziphi izinhlelo zokusebenza zomdabu esizisuse ngaphambilini, kufanele sikwenze lokho iya esitolo sohlelo lokusebenza lwe-Apple bese ubheka igama lesicelo. Yize kubonakala kulula, kungenzeka ukuthi abanye abasebenzisi bangakuboni ngokucace kangaka, ngakho-ke sizochaza ngesibonelo esisebenzayo, sisuse uhlelo lokusebenza lweCalculator.
Lapho sesisusile uhlelo lokusebenza, sivula i-App Store bese siya ku- inkambu yokusesha.
Emkhakheni wokusesha, sibhala igama lesicelo esifuna ukusibuyisa. Kufanele sazi, yebo noma yebo, igama elithile lesicelo ukuthi sifuna ukufaka kabusha.
Umphumela wokuqala ovela njalo ngokuya ngemibandela yokusesha, kulokhu i-Calculator, nIzokukhombisa uhlelo lokusebenza lomdabu ebesilususile.
Siqiniseka kanjani ukuthi kunjalo? Kulula kakhulu, ngoba esikhundleni sokukhombisa Thola, isithonjana sefu siboniswa phansi, esimele ukuthi ngaphambili sathenga noma salanda uhlelo lokusebenza kulokhu noma kwamanye amadivayisi. Ukuyilanda futhi, kufanele nje sichofoze kusithonjana sefu ngomcibisholo waphansi.
Ngaphezu kwalokho, ngu uma singenasiqiniseko, chofoza kuhlelo lokusebenza ukubheka ukuthi ngabe umakhi wohlelo yi-Apple uqobo. Igama lomdali wesicelo liboniswa ngezansi kwegama lesicelo, kulokhu okuyi-Apple.
Uma ukuphela kwethu kune-jailbreak
Ngaphandle kokuthi i-jailbreak yehlile eminyakeni emithathu edlule, ngoba I-Apple ikopishe iningi lezici ebezikhona Ngale ndlela yokuvula i-iPhone, abasebenzisi abaningi bayaqhubeka nokuyisebenzisa, ukuze bajabulele eminye imisebenzi engakatholakali futhi ebukeka incane ngokuzayo.
Enye yama-tweaks abasebenzisi abaningi abayisebenzisayo nesinye sezizathu ezinkulu zokuqhubeka nokuqhekeka kwejele, sithola ukuthi sikwazi ukuguqula izithonjana zezinhlelo zohlelo, kanye nezinye esikwazile ukuzifaka. Uma uphakathi kwalolu hlobo lomsebenzisi futhi isithonjana sesinyamalele, sikhonjiswa kokumhlophe noma sanyamalala, khona-ke sizokukhombisa kanjani ukubuyisela iPhone imifanekiso.
I-Jailbreak yinqubo yokungena ngaphakathi, ngoba ivumela ukufinyelela empandeni yohleloNgakho-ke, lezi zinhlobo zokuguqulwa zingenziwa, kwesinye isikhathi ezingadala ukuthi idivayisi yethu iqale ukukhombisa ukungasebenzi kahle.
Lokhu kungasebenzi kahle kwesinye isikhathi kubonakala kakhulu lapho sifaka i-tweak that ayihambisani ne-iOS ne-Cydia version ukuthi siyifakile, ngakho-ke kufanele siqaphele lapho sifaka noma yiluphi uhlelo lokusebenza lolu hlobo, ngoba lungalimaza ukugqashuka kwejele ledivayisi yethu.
Lokhu kufundisa kungaba lula kepha akusizi ukwazi okwengeziwe mayelana nezinye izinketho ze-iPhone.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » Okokufundisa namanyuwali » Ungayibuyisela kanjani imifanekiso ye-iPhone?
UJose Cantellops kusho
Ngifuna ukuthi ngingalanda kanjani izingqikithi zesivikeli sesikrini se-3G iPhone 8G ekhasini lamahhala ngoba ngiyakwazi ukuyilayisha kwikhompyutha futhi angikwazi ukuyidlulisela ocingweni, ngicela, uma othile enolwazi lokukwenza, ithumele ku-imeyili yami air_jose@yahoo.com ngokushesha okukhulu ngoba ngifuna ukukhipha i-iphone yami
Phendula kuJose Cantellops
UBartolome Queteba kusho
Into ukuthi, i-Calculator, ikhampasi, nezimpawu zokuqopha izwi zilahlekile futhi angikwazi ukuzibuyisela esikrinini sasekhaya. Ukuzibona ngichofoza kabili kunkinobho engezansi bese zonke izinhlelo zivela bese kusuka lapho ngiyazikhetha lapho ngizidinga. Ngobuqili obungenhla akukho lutho lokubuyiselwa olusebenzayo. Ngiyabonga
Phendula uBartolome Queteba
Nami kwenzeka into efanayo, ngabe kungenxa yokugqashuka kwejele?
Kuhle kakhulu kungisizile kakhulu
UJuan de Lomas de zamora kusho
Sawubona, ngenze okungenhla, futhi kwasebenza, kepha angitholi isithonjana sewashi, engisisebenzisa kaningi njengewashi le-alamu, ngine-Iphon 4 (ngaphambi kwe-S), ngicela, othile angitshele «umzila»
Phendula uJuan de Lomas de zamora
Ngilahlekelwe yisithonjana se-SETTINGS
Angisitholi isithonjana sezilungiselelo ... ngisibuyisa kanjani?
Ngivuselele i-iphone yami futhi isithonjana sokukhanya sanyamalala (ukusebenzisa i-flash njengesibani noma okufana nalokho)… Ngikuthola kanjani?
UKUPHILA, NGIYABONGA. Isebenziseka lapho ufaka i-gridlock yama-iwidges ku-ios 7.0.4. Lapho sengicabanga ukuthi ngaze ngadingeka ukubuyisa futhi ngalezi zinyathelo ezilula kodwa eziwusizo zaxazululwa.
Okwamanje kakhulu kusho
Kuhle okuthunyelwe kungisizile kakhulu
Madoda, ngivule i-IPhone 4 yami, ngibeke i-Telefónica chip kuyo futhi isithonjana soxhumana nabo sinyamalale esikrinini sokuqala, njengoba kuphakanyisiwe, ngilandele izinqubo zokusetha kabusha isikrini sasekhaya futhi akukho okwenzekayo, unganikeza enye indlela , Ngilinde impendulo yakho.
Susa isithonjana sezilungiselelo zami, ngisibuyisa kanjani?
Kungisebenzele Ngiyabonga love
Ngilahlekelwe yisithonjana se-1Password ku-iPnone 6 futhi ngiyithole ngokuyivala ngokuphelele bese ngiyiyiqala phansi. Kubonakale kimi njengokusha kusikrini sokugcina.
Yonle du reset izilungiselelo futhi ngilahlekelwe yizo zonke izithonjana, ngicela ungisize, ngithola kuphela ukukhetha izilimi
Ngisuse isithonjana se-whatsapp ku-iphon 3 yami, futhi angazi ukuthi ngizoyithola kanjani, nginike isandla, idivaysi, ngaphandle kokuba isililo sokugcina, isasebenza kahle.
UJorge Leon kusho
Ngisithola kanjani isithonjana seposi i-iPhone 6 plus
Phendula uJorge Leon
Ngiphinde ngalahlekelwa uphawu lwemeyili, ngalufuna nge-siri ngafaka i-akhawunti yami kepha ithi selivele likhona, angazi ukuthi ngililungisa kanjani.
Ngisuse iphutha isithonjana sokulanda umculo ku-iphone yami. Ngibuyisele izithonjana zesikrini futhi aziphumeli, ngingazithola kanjani? Ngibonga kakhulu.
Ngisuse isithonjana sesikhumbuzo, ngingasithola kanjani? Ngiyabonga
Ngisuse isithonjana sesikhumbuzi futhi ngifuna ukululama
UReyna Divva kusho
Ngiyabonga kakhulu, imininingwane yakho yangisiza ukuba ngithole amanothi ami njengoba ngangisuse uhlelo lokusebenza ku-iphone yami.
Phendula u-Reyna Divva
UJorge Leydan kusho
USuper ungikhonze ngiyabonga kakhulu !!
Phendula uJorge Leydan
ICall of Duty Mobile beta yethula ngesonto elizayo
I-Spotify yethula idivayisi yayo yezimoto, "Into Yezimoto"